झन् कमजोर विभाजनपश्चात एमालेमै बसेका नेताहरू ! | Nepal Ghatana
प्रकाशित : ३० पुष २०७८, शुक्रबार २२:०४
नेकपा एमालेले पार्टी विभाजनपश्चात् ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि बोलाएर गत असोजमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो । वडा र पालिका अधिवेशन सकेर राष्ट्रिय महाधिवेशनसमेत सम्पन्न गरिसकेको नेकपा एमाले अहिले जिल्ला अधिवेशनमा छ ।
त्यस्तै, एमाले अछामको अध्यक्षमा पनि भीम रावलका उम्मेदवारलाई अध्यक्ष ओलीपक्षका चन्द्रबहादुर बोहराले पराजित गर्नुभयो । त्यहाँ रावल पक्षका उम्मेद्वार प्रकाशबहादुर शाह पराजित हुनुभयो ।
पदाधिकारीमा पनि अर्को पक्षकै पल्लाभारी भएको छ । बरु माओवादी पृष्ठभूमिबाट एमालेमा रहेका नेताहरू पदाधिकारीमा विजयी हुँदा शुरु देखिकै एमालेमा रहेका नेताहरू पछि परेका छन् ।
यी उदाहरणले जिल्ला नेतृत्व चयनमा दशबुँदे पक्षधरका अधिकांश ठाउँमा किनारा लागेका छन् । आखिर एमालेभित्रै रहेका दश बुँदेवालालाई कार्यकर्ताले किन पत्याएनन् ? कि ओली रबैयामा कार्यकर्ता विचार बन्धक राख्न बाध्य भएका होलान् ?
प्रतिपक्षीको विरोधका वावजुद सरकारले आफनो कामलाई अघि बढाइरहनु लोकतन्त्रको मर्म विपरित: भीम रावल